उपत्यकामा बन्दै ४ स्मार्ट सिटी, कुन सहरको डिपीआर कसले गर्दैछ तयार ?
डिपीआर ९ महिनामा तयार हुने
| 2018-06-26 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौँ । उपत्यका विकास प्राधिकरण उपत्यकालाई अत्याधुनिक सहरको नमुनाको रुपमा विकास गराउने उद्देश्यअनुरुप स्मार्ट सिटीको परिकल्पना ल्याएको छ ।
उपत्यकाका ४ वटा क्षेत्रमा नमुना स्मार्ट सिटी बनाउने योजना अनुरुप छुट्टाछुट्टै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारको काम अघि बढाइएको छ ।
एकवर्षभित्रमा ४ वटै स्मार्ट सिटीको डिपीआर रिपोर्ट आउने उपत्यका विकास प्राधिकरणले बताएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफल ४ वटा स्मार्ट सिटीले ओगट्ने छन् ।
कुन दिशामा कुन सहर ?
इशान सहर उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो सहरको रुपमा १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ ।
यसले काठमाडौँको पूर्व भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक–तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिम जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम–मुलपानी–गोठाटार–मनोहरा, उत्तर साँखु बजार–साँखु जाने मुल सडक र दक्षिण भक्तपुर पुरानो बाटोसम्म फैलिने छ ।
उक्त क्षेत्रका भू–भागमा नयाँ नगरको विकास गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना रहेको छ ।
यसको डिपीआरको काम फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनीले काम गरिरहेको छ ।
आग्नेय सहर लगभग १० हजार रोपनीमा फैलिने छ ।
यो सहर पूर्वमा भक्तपुरको सूर्यविनायक, पश्चिममा खहरे खोला–बालकोट विरुवा सडक–पानी ट्याङ्की, बालकोट अमरनगर ठिमी–अरनिको राजमार्ग सिमाना, उत्तरमा अरनिको राजमार्गको सिमाना र दक्षिणमा भक्तपुरको सिलामगाल, रानीकोट जंगल–तर्खगाल पात्लेटार, विरुवा–खहरेसम्म फैलिएको छ ।
यसको डिपीआरको जिम्मा इआरएमसी नेपालले पाएको छ ।
नैऋत्य सहर १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ ।
यसले पूर्वमा छ्यासीकोट–सैंवु–फर्सिडोल, बागमती नदिको पुल, पश्चिममा बागमती नदि, उत्तरमा साविकको सैंवु गाविसकामे सिमना, दक्षिणमा बागमती नदिसम्म फैलिएको छ ।
यसको डिपीआरको जिम्मा ईआरएमसीनै पाएको छ ।
उत्तर सहर पनि १० हजार रोपनीमा फैलिने छ ।
यसको क्षेत्र पूर्वमा सामाखुसी–टोखा सडक–बाइपास, पश्चिममा काभ्रेस्थली–बाइपास, उत्तरमा सपनातीर्थ मालुङ–काभ्रेस्थलीको बाटो, दक्षिणमा ग्रिनल्यान्ड चोक–महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडकलाई छुने गरी अघि बढ्नेछ ।
यसको डीपीआर फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
चारवटै सहरको डिपीआर रिपोर्ट ९ महिनामा तयार हुने भएको छ ।
यी सहरको निर्माण डिपीआर तयार भएको ५ वर्षभित्र सक्ने योजना रहेको छ ।
मंगलबार १२, असार ०७५